कुमारित्व फर्काउने क्लिनिक | मेरो लिम्बुवान
प्रतिशोधपर्ूण्ा आक्रमण हुने डरमा सोनिया आफ्नो परिचय लुकाउन चाहन्छिन् । उनी पे™सिको एउटा क्याम्पसमा अध्ययनरत पातली र सुनौलो कपाल भएकी युवती हुन् ।
प|mान्समा जन्मे पनि अरबी संस्कृति र परम्परा सोनियाको जीवनको केन्द्रभागमा छ । अरबी परिवारको शंकालु आँखाअगाडि युवावयको जीवन साँच्चिकै कठोर छ ।
‘पहिलो यौन सर्म्पर्कपछि मलाई आत्महत्या गरौं कि जस्तो लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘किनकि, मैले अर्को समाधान नै देखिनँ ।’ तर, सोनियाले समाधानको बाटो पहिल्याइन् ।
अन्ततः उनी च्यातिएको झिल्लीको शल्याक्रिया गर्न डा. मार्क अबेकासिसको पे™सिस्थित क्लिनिकमा पुगिन् । आफ्नो गोप्यता कसैलाई पनि नखोल्ने उनी बताउँछिन्, विशेष गरी श्रीमान्लाई ।
‘यसलाई म मेरो यौनजीवन हो भन्ने ठान्छु र यसबारे मैले कसैलाई भन्नुहुँदैन,’ उनी भन्छिन् । पुरुषहरूकै कारण आफूहरू झूटो बोल्न बाध्य भएको पनि उनले सुनाइन् ।
डा. अबेकासिसले ‘हाइमेनोप्लास्टी’ भनिने शल्यक्रिया हप्तामा दर्ुइ या तीनओटा गर्छन् । झिल्लीको तन्तु पुनः जोड्ने शल्यक्रिया गर्न स्थानीय एनेस्थेटिकमा करिब आधा घन्टा लाग्छ ।
आफ्ना ग्राहकको औसत उमेर २५ वर्षहुने र उनीहरू समाजका सबै पृष्ठभूमिबाट आउने गरेको उनले बताए । यस्तो शल्यक्रिया संसारभरका क्लिनिकहरूमा गरिने भए पनि डा. अबेकासिस थोरै अरबी र्सजनमध्येका एक हुन् जो यस विषयमा खुलेर कुरा गर्छन् । केही महिलाहरू विवाहका लागि कुमारित्वको प्रमाणपत्र -भर्जिनिटी र्सर्टिफिकेट) चाहिएर पनि उनीकहाँ आउँछन् ।
‘उनी खतरामा रहेको पनि हुन सक्छिन्, किनभने कहिलेकाहीँ यो परम्परा र परिवारको विषय हुन्छ,’ डा. अबेकासिस भन्छन्, ‘चिकित्सकको रूपमा हामीलाई उनका लागि निर्ण्र्ाागर्ने र निर्ण्ाायकको भूमिका खेल्ने अधिकार छैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
चिनियाँ उत्पादकहरूले गैर-र्सर्जिकल उपायहरू पनि बजारमा ल्याएका छन् । एउटा वेबसाइटले कृत्रिम भिल्ली २३ युरोमा बिक्री गर्छ । इलास्टिकले बनेको चिनियाँ झिल्लीमा नक्कली रगत भरिएको हुन्छ । एकपटक योनिमा राखेपछि महिलाको कुमारित्व फर्किने कम्पनीको दाबी छ ।
तर, नाडाका लागि यो विकल्प रहेन । लेबनानमा हर्ुर्किरहेकी नाडा मायाप्रीतिको चक्करमा परिन् र कुमारित्व गुमाइन् । ‘तर, मलाई मेरो परिवारले चाल पाउँछ भन्ने डर लागिरह्यो, किनभने त्यो सम्बन्ध उनीहरूले स्विकार्दैनथे,’ उनी भन्छिन्, ‘मलाई उनीहरूले मार्न सक्छन् भन्ने डर पनि लाग्यो ।’
प्रेम सम्बन्धको सातबर्सर्ेेवधिमा उनका प्रेमीको परिवारले अर्कै युवतीसँग उनको बिहे गराइदिन चाह्यो । त्यसपछि नाडाले आत्महत्या गर्न खोजिन् । ‘मैले एक बोटल पानाडोल र एक बोटल घरासयी रसायन पनि पिएँ,’ उनले सुनाइन् ।
अहिले नाडाको उमेर ४० वर्षभएको छ, उनले ६ वर्षघि शल्यक्रियामार्फ कुमारित्व फिर्ता पाएकी हुन् । त्यसपछि बिहे गरेकी नाडाका दर्ुइ सन्तान छन् । उनको विवाह एउटा तनावपर्ूण्ा परीक्षण थियो । ‘त्यो रात म निदाइनँ । म कराइरहेको थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो ज्यादै डरलाग्दो थियो र पनि उसले चाल पाएन ।’
यो एउटा यस्तो गोप्यता हो, जसलाई नाडा -परिवर्तित नाम) ले आफ्नो मृत्युसँगै लैजानेछिन् । ‘यसलाई मृत्यर्ुपर्यन्त गोप्य राख्न म तयार छु,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबारर्ेर् इश्वरलाई मात्र थाहा हुनेछ ।’
पुरानो पुस्ता मात्र होइन, नयाँ पुस्ताले पनि विवाहपर्ूव यौनसम्बन्ध नराखेकै युवतीलाई श्रीमती बनाउनर्ुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यतामा विश्वास राख्छ ।
नुर एकजना आधुनिक पेसाकर्मी हुन् । दमास्कसमा काम गर्ने उनी एउटा धर्मनिरपेक्ष समाजमा सिरियाली युवाहरूका प्रतिनिधि पात्र हुन् । नुर महिलाले समानता पाउनर्ुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् र पनि उदार पर्खालमुन्तिर गहिरोसँग जरा गाडेको विचार उनको मनमा बाँकी नै छ ।
‘मलाई थाहा छ, जुन युवतीले कुमारित्व पुनर्स्थापित गरेकी हुन्छे, तिनीहरू विवाहको रात लोग्नेबाट समातिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले श्रीमती कुमारी छैन भन्ने कुरा अनुभव गर्छन् । यदि समाजले स्विकार्छ भने पनि म त्यस्ती युवतीसँग बिहे गर्दिनँ ।’
मुस्लिम धर्मगुरुहरू कुमारित्वको मुद्दा धर्मसम्बन्धी होइन भन्छन् । ‘हामीले के सम्झनर्ुपर्छ भने जब मानिस विवाहको पहिलो रात तन्नामा रगतका टाटाको प्रतीक्षा गर्छ भने ती सबै सांस्कृतिक परम्परा हुन्’ सिरियाली धर्मगुरु शेख मोहमद हबासले भने, ‘यो सरिया कानुनसँग सम्बन्धित छैन ।’
मध्यपर्ूवको क्रिस्चियन समुदाय पनि नवविवाहिता महिला कुमारी हुनुपर्नेमा स्पष्ट छ । अरेबियन लेखक तथा सामाजिक टिप्पणीकर्ता साना अल खायत यो सबै मामिला नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट प्रेरित छ भन्छन् ।
‘कुमारीले आफ्नो लोग्नेलाई अरूसँग तुलना गर्ने अवसर पाउँदिनन् । यदि उनले अर्को पुरुषसँग यौनसर्म्पर्क राखेकी छन् भने उनीसँग अनुभव हुन्छ । अनुभवले महिलालाई अझ बलियो बनाउँछ,’ उनले भने ।
यो २१औं शताब्दी हुन सक्छ, तर अरबी संस्कृतिमा कुमारित्वको मुद्दा अझै पनि जीवन र मृत्युको विषय बन्छ, खासगरी सोनिया र नाडाजस्ता महिलाका लागि । झिल्ली मर्मतले कुमारित्व फर्काए पनि यसले गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको मूल्य र मान्यता बोकेका समाजलाई आधुनिक समाजको धारणासँग एकाकार गराउन सक्दैन ।
Categories: प्रवासी समाचार, रोचक समाचार, Uncategorized . . Author: याकथुम्बा
आज देखि सुरु हुदैछ इंडियन आईडल ५ मेरी प्यारी सृजना